Izindaba - Ziyini izinzuzo zamawindi e-casement, amawindi angaphakathi avulwa futhi aguquliwe, namawindi avula ngaphandle nangaphezulu?
Yiziphi izinzuzo zamafasitela e-casement, ukuvula ngaphakathi nangamawindi aguquliwe, nokuvulwa kwangaphandle namawindi alenga phezulu?
Iwindi liyindlela yokuhlanza umoya nokukhanyisa egumbini lethu. Ngakho-ke, sidinga ukusebenza kancane kakhulu ekukhetheni windows. Namuhla, sizokukhombisa izinzuzo zamawindi alenga ohlangothini, amawindi avulwe ngaphakathi, namawindi alengiswe ngaphandle.
Ukungenisa umoya okuhle, ukuvala umoya kahle, ukwahlukanisa umsindo, ukulondolozwa kokushisa nokungangeneki. Amafasitela okuvula ngaphakathi alungele ukuhlanzwa, kepha azothatha ingxenye yegumbi lapho evulwa ngaphakathi; lawa avuleka ngaphandle awathathi sikhala lapho evulwa, kepha ukuvuleka kwangaphandle kunendawo enkulu yokwamukela umoya. Kwezinye izindawo, akuvunyelwe ukufaka amawindi angaphandle.
Vula ngaphakathi bese uwela ngaphakathi:
Kuyindlela entsha eyenziwe ngesisekelo samawindows e-casement. Ingavulwa ngezindlela ezimbili, kungaba ngokuvundlile noma ngokuguqula (ingxenye ephezulu yesinti lewindi ithambekele ngaphakathi). Lapho kuguqulwa, kungavuleka igebe elingamasentimitha ayishumi, okungukuthi, iwindi lingavulwa kancane ngenhla, futhi ingxenye evuliwe ingamiswa emoyeni futhi ilungiswe ngohlaka lwamafasitela ngamahinji. Inzuzo yayo ithi: ingangena umoya, kepha futhi ingaqinisekisa ukuphepha, ngenxa yehenjisi, iwindi lingavula kuphela amasentimitha ayishumi womthungo, alikwazi ukufinyelela ngaphandle, ikakhulukazi elifanele ukusetshenziswa uma kungekho muntu ekhaya.
Izinzuzo zamawindi aguquliwe:
1. Ayithathi isikhala sangaphakathi lapho iguqulwa. Amakhethini angavulwa futhi avaleke ngokukhululeka.
2. Izingane zingadlala ngokukhululeka uma ziphansi. Ungahlanza negumbi ngaphandle kokukhathazeka ngokushaya ikhanda noma umzimba kusuka ekhoneni lewindi.
3. Izingane ezidlalayo nezikhuphukela efasiteleni ngeke zibe sengozini yokuwa ngewindi.
4. Uma ungena ngaphakathi, vala kuphela iwindi ngaphakathi ngaphambi kokulivulela endaweni evulekile, ngakho-ke akudingeki ukhathazeke ngokuthi isela lizongena ekamelweni ngefasitela elibukhali. Ungavula i-hanger ephezulu lapho uphuma ukugcina umoya wasendlini uhlanzekile ngaso sonke isikhathi.
5. Igumbi ngokwemvelo linomoya opholile lapho liguqulwa. Kungena umoya ohlangothini lwefasitela, hhayi ngqo emzimbeni, kukwenza uzizwe ukhululekile.
6. Uma kunomoya opholile nemvula elula, amaconsi emvula angaconsa kuphela engilazini, hhayi egumbini. Isikhumbuzi sobungani: Gcina amafasitela avaliwe uma kunomoya onamandla nemvula enamandla!
vula iwindi eliphezulu elenga ngaphandle
Amafasitela alengiswe phezulu avula ngaphandle aqhutshwa ngokusebenza kwesibambo sefasitela lewindi ukushayela ukunyakaza okuhambisanayo kwe-actuator yehadiwe, ukuze ibhande lewindi likwazi ukuvulwa ngokuvundlile noma ligobisiswe egumbini ukuvula i-angle ethile yokungenisa umoya. Ngokuzungezisa isibambo sefasitela, inqubo yehadiwe ehlanganayo ngaphakathi kwewindi iyaqhutshwa, ukuze iwindi likhiywe (bamba ngokuya phansi), livuleke (lisingathe livundlile), futhi limiswe (phatha ubheke phezulu phezulu). Akuthinti isikhala esingaphakathi endlini futhi kuvame ukusetshenziswa isikhathi esiningi; ingayixazulula ngempumelelo inkinga yokulwa nokwebiwa, futhi iphephile ukuvula uma kungekho muntu endlini noma ebusuku.
Izici zamawindi alenga phezulu avula ngaphandle:
1. Ukungenisa umoya ngoba indawo eguquliwe kungenye indlela yokuvula iwindi elenga phezulu ngaphandle, ivumela igumbi ukuthi lizungeze ngokwemvelo nomoya wemvelo, futhi umoya wasendlini uhlanzekile, ngenkathi uqeda amathuba okuba amanzi emvula angene egumbini. Umoya ohlanzekile ngokungangabazeki uzokwenzela abantu indawo yokuhlala enethezekile.
2. Ukuphepha Izingxenyekazi zekhompuyutha zokuxhumanisa ezihlelwe eduze kwebhande lewindi nemisebenzi ehlukahlukene yesibambo sokusebenza endlini Lapho ibhande lewindi livaliwe, indawo ezungezile imiswe ohlakeni lwewindi, ngakho-ke ukusebenza kokuphepha nokulwa nokweba kuhle kakhulu.
3. Kulula ukuhlanza amawindi. Ukusebenza okulula nesibambo sokuxhumanisa kungenza ibhande lewindi lingene ezindlini. Kuyinto elula futhi ephephile ukuhlanza ingaphandle lewindi.
4. Ukusebenziseka Kuyakugwema ukungena endaweni yasendlini lapho kuvulwa iwindi elingaphakathi, futhi kuyaphazamisa ukulengisa amakhethini bese ufaka ujantshi wezingubo ophakamisa.
5. Ukubeka uphawu okuhle nokugcina ukushisa kusebenza Ngokukhiya okuningi okuzungeze isihlakala sefasitela, ukuvalwa kokufakwa uphawu kanye nokugcinwa kokushisa kweminyango namawindi kuyaqinisekiswa.
Kunezinzuzo eziningi zokuvula ngaphandle amawindi aphezulu, ukusebenza okulula nokusebenza okuphezulu, okwandisa kakhulu injabulo yabathengi.